Madaxweynaha Djibouti oo ka dhoofay Muqdisho Booqasho laba maalin ah kadib | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Madaxweynaha Djibouti oo ka dhoofay Muqdisho Booqasho laba maalin ah kadib
Madaxweynaha Djibouti oo ka dhoofay Muqdisho Booqasho laba maalin ah kadib
22 Febraayo 2015, Muqdisho: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdigii uu hoggaaminayey ayaa maanta ka ambabaxay Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ee Aadan Cadde ee Muqdisho, kadib markii ay u dhammaatey booqasho laba maalmood ah oo uu ku joogey Soomaaliya.
Intii uu dalka joogay Madaxweyne Geelle waxaa uu wadahadal la yeeshay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Waxaa kale oo uu Madaxweyne Geelle oo uu wehliyo madaxweynaha Soomaaliya ay wadajir u dhagax dhigeen Akademiyad Goboleedka Afka Soomaaliga oo Muqdisho laga dhisayo iyo socdaal ay ku tageen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku sii sagootiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale.
Previous articleMadaxweyne Geelle oo Dadka reer Hiiraan ugu yeeray ka shaqaynta Nabadda.
Next articleMadaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Djibouti oo ku baaqey in la joojiyo colaadda gobolka Hiiraan